राप्रपामा उम्मेदवारका लागि शुल्क तोकियो, कुन पदमा कति? - ramechhapkhabar.com
राप्रपामा उम्मेदवारका लागि शुल्क तोकियो, कुन पदमा कति?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले जारी महाधिवेशनमा उम्मेदवारका लागि शुल्क तोकेको छ। जसका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनेले एक लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। एकता महाधिवेशन बिहीबारबाट राजधानीमा जारी छ।
यस्तै उपाध्यक्ष पदका लागि ७५ हजार तोकिएको छ । यसैगरी महामन्त्रीका लागि ५० हजार र केन्द्रीय सदस्य पदका लागि १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।